पहिलोपटक घटे मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउने ! कारण के हो ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
पहिलोपटक घटे मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउने ! कारण के हो ?
Posted by Headline Nepal | ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०८:०४ |
६ मंसिर,काठमाडौँ । मोबाइलको पहुँच बढेसँगै पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि व्यापक वृद्धि आएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच बढ्दो सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धाले पनि इन्टरनेटमा आम मानिसको पहुँच बढाइरहेको छ ।
इन्टरनेटको बढ्दो बजारबीच पनि प्राधिकरणकै पछिल्लो तथ्याङ्क भने केही फरक छ । अर्थात् पहिलोपटक मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार मोबाइलमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका तीन सेवा प्रदायकमध्ये एनसेलका प्रयोगकर्ता घटेका छन् । साउनसम्म एनसेलका ७४ लाख सात हजार मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा यो सङ्ख्या घटेर भदौमा ७१ लाख ८३ हजार पुगेको छ ।
यसबीचमा एनसेलका करिब दुई लाख मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता बढ्दा समग्र मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक महिनामा करिब एक लाखले मात्र घटेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार साउनसम्म टेलिकमका ८१ लाख ६१ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा भदौसम्म बढेर ८२ लाख ७० हजार पुगेको छ ।
त्यस्तै साउनसम्म १७ लाख नौ हजारबाट स्मार्ट टेलिकमका मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सामान्य बढेर करिब १८ लाख एक हजार पुगेको छ । यसबीचमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको वायरलेस प्रयोगकर्ता पनि करिब एक हजार पाँच सयले घटेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मोबाइल डेटालाई केन्द्रित गरेर लागू गर्ने प्याकेज अथवा अभियान सम्पन्न हुँदा पनि सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा भिन्नता देखिन सक्छ । एनसेलले लागू गरेको ‘इन्टरनेट फर अल’ नामक अभियान साउनमा सम्पन्न भएकोले भदौ महिनामा ग्राहक सङ्ख्या घटेको हुनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
Previousमहिला प्रहरी जवान आफ्नै हाकिमबाट असुरक्षित ! सईले गरे यसरी गरे कुटपिट
Nextटोटनह्याम साबिक विजेता रियल मड्रिडलाई पछि पार्दै समूह विजेता !
२५ बैशाख २०७४, सोमबार ०८:१६
४४ वर्षीय आमाले २१ वर्षीय छोरीलाई गर्भाशय दान गरिन !
६ जेष्ठ २०७४, शनिबार १७:४८
राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातसँग जोडेर एमालेले देशको माहोल बिगा¥यो : मन्त्री थापा
४ पुष २०७३, सोमबार २०:०८
मोदी जलविद्युत् आयोजनाका कारण पर्यटकीय स्थल विरेठाँटीबजार जोखिममा
१३ भाद्र २०७३, सोमबार ०८:५४